Theodolites elekthronikhi iziteshi Imininingwane
theodolites elekthronikhi iziteshi Imininingwane kabanzi sokulinganisa futhi ucwaningo emsebenzini wezokwakha kanye nomklamo.
Ngaphambi ekuqaleni ubukhulu XVI leminyaka engeli mpo futhi enezingqimba ukukhiqiza amathuluzi eziningana ezahlukene. Ukuze iyashelela wezokwakha futhi ucwaningo imisebenzi edingekayo idivayisi jikelele ezingase sihlanganise imisebenzi ehlukahlukene.
I sibonelo lamadolobha esimanjemanje theodolite isampula leminyaka elidlule baye bakhonza njengezithunywa ithuluzi okuthiwa polimetr. Abembi ke wathatha ngenkulu intshiseko futhi ezisetshenziswa kakhulu umsebenzi wethu. izinguqulo kwesikhathi we maphakathi XIX leminyaka wabeka umqondo yokulandelana kwayo ngokohlu.
Incazelo Electronic theodolite
theodolite Modern inezici eziningi ukukala arsenal yayo. I-engeli ovundlile ibalwa ngosizo kumadivayisi ekhethekile - alidade nezitho zomzimba. Sezitho Zokwenziwa - umbuthano ingilazi nge yemakhono 360 ukuhlukana, okuyinto eqondiswa unomphela futhi bavikelekile umonakalo. Emhlabeni Ukudayela uzungeza alidade nendikimba zedivayisi.
I wokulinganisa isimiso nedatha theodolite electronic kuyahluka kakhulu kusukela yokukhanya. Zonke amanani okubhalwe kanambambili, ngakho esikhundleni degrees, imizuzu namasekhondi kukhona amaqanda noma abathandekayo. Imitha nekufundza idluliselwa esebenzisa amadivayisi Photoelectric.
Ukuze kwandiswe ukuthembeka ukufundwa ukwakhiwa futhi kuhlanganisa ibhamuza mpo amazinga ukwehla. Ukuze uthole idivayisi readout esinembile kuhlanganisa ngesibonakhulu ekhethekile. Isici sici electronic theodolite optical version yayo - kuba phambi apharathasi zokususa futhi ukuqopha mode okuzenzakalelayo, futhi ukurekhoda yabo okwalandela on the chip idivayisi inkumbulo.
Noma yimuphi theodolites esetshenziselwa ohlola noma eminye imisebenzi kumele ulinganiswe. Uma ufunda amaphutha phezu kwezinkambiso esungulwe, kubalulekile ukwenza ushintsho olukhulu ngezithunywa ukulungiswa. Kukhona ejwayelekile kazwelonke kwi izinhlobo theodolites. Kuye ukunemba nesilinganiso zihlukaniswe izigaba ezintathu: olunembile kakhulu, eqondile futhi lobuchwepheshe. Owokugcina kubo, ikakhulukazi isetshenziselwe izinjongo ukuqeqeshwa.
Umgomo we operation ye theodolite electronic
Ngu ubunjalo design yilezi: electronic, isithombe ngqo, wezokwakha, autocollimation, phototheodolites, giroteodolity nge gyrocompass, sokuvuselela. Ngokwesibonelo, photogoniometer has emzimbeni walo Ikhamera olunembile inhlolovo Geological namasayithi esibophezelayo.
theodolites Electronic - amadivayisi ezingaba kakhulu lula inqubo yokususa amagugu emincane, kuqhathaniswa amadivayisi optical ngokugcwele. Leli thuluzi ikuvumela ukuba basebenze kakhulu ngisho nangaphansi kwezimo amnyama. A khona ukuqeda Iphutha display readout. Ngakolunye uhlangothi, nozakwabo electronic akuzona ngaphandle nemiphumela ethile engathandeki, ezifana nokuba khona ngebhethri kumele ngezikhathi agcwalisiwe kusukela amapayipi, ibanga elincane eyamukelekayo okushisa yokusebenza.
Ukukhetha imodeli ezithile theodolite electronic, kufanele anqume ngokuyinhloko nomkhaya imisebenzi. Uma wokulinganisa okusezingeni eliphezulu ukunemba ayihambi phambili ohlwini, kungenzeka ukuphatha ikilasi idivayisi kusukela T15 ukuze T30. Ngokuba njengamazulu ephakeme ngokunemba idivayisi nesilinganiso ekilasini ofanelekile T2 ukuze T5. Uma sidinga i ukunemba engakaze ibonwe, okukhethayo ke kufanele sima imodeli ekilasini T1.
Hhayi hlungu ukuqaphela umthelela izimo sokudubula kukhwalithi sokugcina. Ngokwesibonelo, ukuba khona izihlahla kuleyo ndawo kungathinta ukunemba kufundwa roulette laser. Beam kungaba esikhundleni ziboniswe kusukela oyifunayo amagatsha into bese kakhulu baphendukezele idatha. Ukuba khona endaweni izakhiwo okusezingeni eliphezulu, njengama-cell tower noma ipayipi - kuthinte umphumela wokugcina.
izinga Ezezindlu yokulinganisa idivayisi kumele eyinsimbi futhi wonke amalunga kungenzeka - rubberized ukuvimbela uthuli futhi umswakama. embodiments Yalutho zezitho plastic zisheshe futhi ivamile. Photo electronic theodolite digital lapha ngenzansi.
okufana okuthuthukisiwe zedivayisi - kuyinto isiteshi Imininingwane. Limelela a Symbiosis of computer nomshini theodolite. izindleko zalo kuyabiza ngaphezu kokujwayelekile, kodwa manufacturability umyalelo ezidlula ephakeme. Ifakwe ukubonisa kanye zekhibhodi kokufaka idatha, microprocessor esakhelwe ukwenza izibalo. Automation ikuvumela ukuba enze yonke imisebenzi on the fly, anda kakhulu umkhiqizo ngesikhathi umsebenzi ofanayo isikhathi.
Injongo eyinhloko insimbi - ukudalwa amacebo endaweni inikezwe isikali umdwebo izici impumuzo. Nhliziyo mshini ehlangene noma isilawuli zangaphandle, okuyinto unomthwalo ukucutshungulwa idatha sokudubula inqubo. Isici esiphawulekayo design yomculo namanye amadivayisi geodetic kuyinto Modular, ukuvumela idivayisi ukudala ukuguqulwa ukuhlangabezana nezidingo eziqondile.
ezihlukahlukene Ubude Zokusebenzela
Njengoba kucaca ukuthi iningi esiteshini Imininingwane ifakwe imitha ibanga esekelwe ugongolo laser, le ngokusho ukuqopha indlela ahlukanise phakathi ezimbili izinhlobo isignali:
kuncuma umehluko Ibanga izigaba ugongolo;
ukukala ibanga nendaba ibalwa ukudlula ugongolo laser.
Ukuze ulinganise amabanga amakhilomitha abafinyelela kwabahlanu kuhle ukusebenzisa nezibhebhe lokubonisa a rangefinder laser. Ngezinye ibanga ikhilomitha elilodwa ukuba akusebenzi reflectors, kodwa ke, kufanele kuqashelwe ukuthi kuzoya izinga ebusweni kuboniswa into. Ukumeda ukunemba izilinganiso emincane Imininingwane esiteshini yanamuhla kungenzeka ukufinyelela kumkhawulo eyodwa sesigidi amaphesenti omunye noma omunye milimitha ikhilomitha ngalinye.
izici ezincane ukusebenzisa
Kubalulekile ukwazi ukuthi, ngokomthetho iphutha elinjalo cishe akunakwenzeka sifinyelele ngenxa ithonya izimo sezulu kanye amaphutha ukubekeka ezinye zezici womuntu.
Njengomthetho, iningi inhlolovo imisebenzi eyenziwa at ibanga amamitha angu-300. Okuningi kancane njalo kunesidingo ukwenza lokudubula ibanga amakhilomitha ambalwa. yokukhanya zanamuhla zisenza ukukala ibanga kuze kube 7500 amamitha.
Abanye onobuhle eziphambili kungenziwa ifakwe global positioning system ukuxhumanisa Imiphumela nezilinganiso izixhumanisi amabalazwe, futhi uhlelo ngokuzenzakalela lapho opharetha ayidingi ukuhlanganyela.
Ukukhetha insimbi, udinga ukuchaza imisebenzi yayo. Ukuze idivayisi ezifanele kakhulu nge ukunemba 1-2 mm ikhilomitha ngalinye. umsebenzi Operational kudinga ukudluliselwa ngokushesha idatha ukucutshungulwa ikhompyutha. Ngenxa yalezi zinjongo, ungakhetha imodeli ukuthi ifakwe i-remote control kanye zokuxhumana ezingenazo izintambo module, efana ne-Wi-Fi noma i-Bluetooth. Lezi ukulungiswa amathuluzi kujwayele ukuthi umsebenzi ethungatha isihloko.
Uma kunesidingo ukuze uthumele amaphuzu inhlolovo kusayithi real-ke, ukube bekunjalo, udinga idivayisi uhlelo Duplex nedatha yokufaka.
Kunezikhathi lapho udinga ukwenza ngokudubula into enkulu e Ubukhulu ezintathu. Ngenxa yalezi zinjongo, wasebenzisa Imininingwane esiteshini amamodeli bayakwazi ukusebenza ngakuthathu isithwebuli imodi. Idatha kulolu cwaningo zidluliselwa ku-computer ngendlela ifu iphuzu kungenzeka eminye kusetshenzwe ngumuntu izinhlelo CAD ezikhethekile.
"Gorenje" - kuhhavini kagesi: tinkhulumo, izici, ukubuyekezwa
Izifutho Amapayipi ngoba amanzi: Izibuyekezo
Spatula isithombe sangemuva, izinhlobo zayo kanye nokusetshenziswa
Yini ukunikeza lokuzalwa bakababakazi, ngakho yena uthanda?
Uyini ophikisana nenqubo kahulumeni? Le nhlangano yenkolo yokulwela ophikisana nenqubo kahulumeni e-USSR
Abramovich, Lisin, Deripaska nabanye abantu abacebile Russia
Geogrid komgwaqo: isicelo kanye izakhiwo
Isenzakalo esidume kunazo zonke ballerina Soviet. Ngubani yena?
Ukuya ukuphumula ... Ingabe ngidinga i-passport eCrimea?
Umuthi kulesetayelekile le izinga likashukela egazini "Olidzhim": izibuyekezo zamakhasimende, Ukucaciswa kanye nezincomo isicelo
Indlela yokusebenzisa i-metric "Yandex"? Umhlahlandlela Beginner sika